गुट महासंघ - परिहास - नेपाल
अबचाहिँ कांग्रेस बलियो हुन्छ होला । किनभने, कांग्रेसका तीनै कोइरालाहरु एउटै मालामा उनिएका छन् । यसलाई पार्टीमा ‘कोइराला एकता’ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । कोइराला जति एकढिक्का भएपछि कांग्रेसमा पार्टी बलियो नभए पनि कोइराला गुटचाहिँ बलियो हुने निश्चितै भयो ।
यता कोइराला गुट बलियो भएपछि उता देउवा गुटले पनि शक्ति सञ्चय गर्ने निश्चितै भयो । किनभने, तीन कोइरालाले त्यस्तो एउटै माला लगाएको दृश्य देउवा गुटले टुलुटुलु मात्रै हेरेर त अवश्य पनि बस्दैन होला । फलत: त्यो गुट पनि बलियो हुने नै भयो । अब देउवा गुट बलियो भएको दृश्य पौडेल गुटले हेरेर मात्रै बस्ने कुरा त भएन । आफ्नो गुटलाई संगठित गर्न त्यो गुट पनि सक्रिय हुनैपर्‍यो । यति भइसकेपछि उता सिटौला गुट पनि किन चुप लाएर बस्थ्यो र ? त्यो पनि मैदानमा आउने नै भयो । यतिखेर पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिँदै आइरहेको छ । अत: नेतृत्व बूढाहरुको हातमा नजाओस् भनेर युवा गुट पनि सक्रिय हुने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ । पार्टीमा धेरै गुटहरु चलमलाउन थालेपछि अन्तिममा एउटा त्यस्तो गुट आउनेछ, जसले यी सबै गुट बन्द गरिनुपर्छ भन्दै जोडदार लबिङ थाल्नेछ । यसलाई तटस्थ गुट भन्न सकिन्छ ।
एउटै पार्टीमा यति धेरै गुट ! कठै, कांग्रेस अब गुटैगुटको महासंघ पो बन्न लाग्या हो कि क्या हो ? त्यसो त, महासंघ नै बने पनि केही बात छैन । किनभने, अहिले देशमा संघीय व्यवस्था लागू छ । आखिर संघ र महासंघहरु मिलेरै त संघीय प्रणाली चल्ने हो नि । यसले कांग्रेसलाई एउटा खाँटी संघीय पार्टी बनाउने निश्चित छ ।
प्रकाशित: मंसिर १३, २०७५